कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफलः न रणनीति, न योजना! – Health Post Nepal
अर्जुनधाराका युवामा कोरोना संक्रमण
सोमबार थप ११५४ जनामा कोरोना, संक्रमण मुक्त १००५
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले गत साउन महिनामा हेल्थपोस्टसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘परीक्षण भएकामध्ये १२ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएमा कोरोना नियन्त्रणको लागि छुट्टै रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ।’
२ असोजमा २ हजार २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा संक्रमण दर १७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। पछिल्लो एक साताको तथ्यांक हेर्दा अहिले संक्रमणदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।
संक्रमणको अवस्थालाई हेर्दा अहिले अपनाएको रणनीति फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी बताउँछन्। नयाँ रणनितिका लागि कुनै त्यस्तो ठोस निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संक्रमणदर १० प्रतिशतभन्दा बढ्दा स्थिति नराम्रो मानिन्छ। तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने अन्य देशको तुलनामा संक्रमणदर कम नै रहेको दावी गर्छन्।
‘हामीकहाँ जति संक्रमण पुष्टि भएको छ, त्यो संख्या कम नै हो,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘अरू देशको तुलनामा हाम्रो स्थिति राम्रो छ।’ जनस्वास्थ्य विज्ञहरू संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय धेरैभन्दा धेरै परीक्षण तथा कन्ट्रयाक टे«सिङ रहेका बताउँदै आएका छन्।
पीसीआर परीक्षण बढाउन माग भइराख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने, संक्रमणदर १० प्रतिशतभन्दा कम भएकोले परीक्षण बढाउन जरुरी नभएको बताउँदै आएको थियो।
अहिले संक्रमणको दर दिनदिनै बढ्दो छ। तर, अहिले दैनिक पीसीआर परीक्षण पनि ९ हजारमा ओर्लिएको छ। तर, मन्त्रालय गाइडलाइन परिर्वतन गरेर निःशुल्क कोरोना परीक्षणको दायरा अझ साँघुरो बनाउन छलफल केन्द्रित भएको छ।
संक्रमण बढ्दै जानुले पनि सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी नभएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले अहिलेकै कछुवा गतिमा परीक्षण गराउँदै जाने हो भने संक्रमणले भयावह अवस्था निम्त्याउने छ।
‘अहिलेको तथ्यांकले समुदायमा संक्रमण फैलिएको देखाएको छ, यो बेला झन् धेरै परीक्षण गर्नुको विकल्प छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले परीक्षणको लागि अपनाएको रणनीतिले कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन।’
नेपालमा संक्रमणको अवस्था
सरकारले कोरोनाको लक्षण भएका वा कन्ट्रयाक हिस्ट्रीमा रहेका मानिसको पीसीआर परीक्षण गदैँ आएको छ। त्यसैगरी, उपचारको पाट्टोमा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पताल राख्ने र लक्षण नभएका केसलाई आइसोलेसन सेन्टर र होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ।
असोज भरका लागि अहिले बनाएको रणनीतिअनुसार नै काम हुने डा. समीर बताउँछन्। ‘नयाँ योजनाको लागि मन्त्रालयभित्र सैद्दान्तिक रूपमा छलफल भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पारित गर्नुपर्छ,’ डा. समिरले भने, ‘परीक्षण र कन्ट्रयाक ट्रेसिङको मोडलमा परिवर्तन हुन सक्छ।’
नयाँ रणनीतिमा बनाउन मन्त्रालयले मात्र नसक्ने उनी बताउँछन्। जनस्वास्थ्यका हिसाबले संक्रमण बढ्दा जोखिम बढेको छ। संक्रमण फैलावटलाई स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने क्षमतामा हुने काम भइरहेको डा. समिर बताउँछन्।
संक्रमण समुदाय स्तरमा गइसकेको हुनाले अब आउट ब्रेकको नियन्त्रणको पाटोमा बढी फोकस हुनुपर्ने डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। अहिलेसम्म समयमा नै कन्ट्रयाक ट्रेसिङ हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘कुनै समुदायमा एक हजार जनामा संक्रमण देखिएमा ५ हजारको परीक्षण गर्नुपर्दछ,’ डाक्टर अधिकारी भन्छन्, ‘परीक्षणबाट नै जोखिम समूहलाई जोगाउन सकिन्छ।’
सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कति फलो गर्छन्, त्यहीअनुसार रणनीति बने डा. गौतम बताउँछन्। ‘बेलायत जस्तो देशले अझै पनि कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरेको छैन, लक्षण भएका मात्र जाँच गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसारमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्ने राष्ट्र धेरै कम छन्। त्यसकारण कन्ट्रयाक ट्रेसिङको विधिबाट जाने कि अन्य विधिबाट जाने भन्ने कुरा मान्छेले देखाउने व्यवहारले निधो गर्छ।’
Tags: कोरोना संक्रमण, रणनीति